Isikhungo Sokucwaninga Ngemikhiqizo
Ukuphishekela imikhiqizo yensimbi ephezulu
Ukugxiviza okuqhubekayo yisixazululo esisebenza kahle kakhulu sokugxiviza esingaqinisekisa kokubili ukukhiqizwa kanye nekhwalithi.
Kungaba khona amasethi amaningana ezingxenye zokugxiviza ezihlanganiswa izingxenye ezihlukene ngobujamo obuhlukene obukhiqizwa ekunyatheleni okuqhubekayo.
Isikhathi eside, indlela yokuhlola ikhwalithi yengxenye kube inselele enkulu, kuze kube yilapho sisebenzisa ubuchwepheshe bethu bombono futhi sifaka isistimu ye-CCD kusigxivizo esiqhubekayo.
Uhlelo luhlanganisa umsebenzi wokuhlola ikhwalithi okuhlanganisa ukuma kwengxenye, ukuhlola ubukhulu, ukuhlola ukubukeka kwengxenye.
Kungakhathaliseki ukuthi ufuna izingxenye ze-die casting ezenziwe ngazo I-Alu, iZinc, noma iMg, singakunikeza isevisi yethu yekhwalithi ephezulu ngesabelomali esinengqondo.
Kwezinye izingxenye ze-die casting ezidinga ukucutshungulwa kwesibili njengokumba imbobo, ukucisha nokucwenga, singakunikeza isevisi yokuma okukodwa. Lesi yisixazululo sendabuko sokusakaza i-die-cast.
Ukonga izindleko zokukhiqiza i-die casting, multi-slider die casting isikhuntaiyisixazululo esingcono kakhulu. Ezingxenyeni ezisuka kusikhunta se-multi-slider die casting, asikho isidingo somsebenzi owengeziwe wokususa ukungcwaba noma ukupholisha endaweni ethile.
Lezi zinyathelo ezi-2 zingakusindisa ezindlekweni ezinkulu zokusebenza. Isikhathi esiphelele somjikelezo wokulingisa singaba sifushane sibe ngaphansi kwamasekhondi ayi-10.
Ndawonye sivame ukuhlinzeka ukwenza ithuluzi lokusika le-de-gating + ulayini wokuzenzakalela, ngale ndlela ungakwazi ukusetha ukususwa kwesango ngethuluzi lokusika kanye nolayini wokuzishintshanisa cishe awunazo nhlobo zabasebenzi ukuze uthole izingxenye zokugcina.
Ukutshala imali iyisixazululo esihle sokukhiqiza imikhiqizo yensimbi engagqwali, izibonelo zezingxenye ezenziwe kusuka ku-403SS naku-316SS, njll.
Lesi yisixazululo esidala sensimbi esakhiwe kusuka ukuphonsa isihlabathi. Ingqikithi yenqubo yokukhiqiza yinde kakhulu futhi ihamba kancane.
Ngokuvamile kuthatha inyanga nengxenye ngeqoqo elilodwa lokukhiqiza. Ngemva kokwenza isikhunta kusuka ku-Alu. noma kusuka ensimbi, isikhunta se-wax siyadingeka.
Ububi balesi sixazululo yilezi: ukukhishwa okuphansi ngesikhathi esifushane, kudinga isikhathi eside ukufeza inqubo ephelele; ingxenye yobukhulu incane kakhulu ekubekezeleni uma iqhathaniswa nomjovo wepulasitiki kanye nokufakwa kwe-die-casting ngoba kuze kube manje ziningi izinqubo ezisasenziwa ngesandla ngabasebenzi abanzima kakhulu abadingekayo; ezinye izici azikwazi ukwakhiwa futhi zingenziwa kuphela ngokucubungula okwesibili njengokugaya, ukubhola noma ukupholisha.
Ikheli:Indawo yezimboni yaseHonglaiya, eShatou, eChang'an Town, Dongguang City, Guangdong, China.
© Copyright - 2021 : Wonke Amalungelo Agodliwe.